Ndụmọdụ maka Branddị iji Nọgide Na-enwe Ntanetị Twitter Feed | Martech Zone
Ndụmọdụ maka Branddị iji Nọgide Na-enwe Ntanetị Twitter
Satọde, Ọgọstụ 16, 2014 Satọde, Ọgọstụ 16, 2014 Douglas Karr
Anyị na-eme ihe ole na ole iji bulie njikọ Twitter anyị n'oge na-adịbeghị anya. Ekwenyere m na ndị otu na Twitter anọwo na-eme ihe ike karịa na imeziwanye mma na ịchụpụ ndị spammers… ọ na-egosi. Na Martech Zone twitter Akaụntụ, anyị na-arụ ọrụ ịchọta na ịgbaso akaụntụ ọhụrụ, kesaa ozi ndị a ma ama site na weebụ niile, gbakwunye foto na vidiyo iji mekwuo mmekọrịta, ma nyochaa mkpesa anyị dị nso.
Onu ogugu US na-eziga 221 tweets kwa izu. Tweet ọ bụla bụ ohere iji kwekọọ na ndị ahịa; ma ọ bụrụ na ha bụ nkwado onwe ha, ụdị nwere ike hapụ uche ndị na-ege ha ntị. N'ezie, 61% nke ndị mmadụ na-ekwu na ha ga-ebipu mmekọrịta mmekọrịta ha na akara nke na-enyeghị ha ọdịnaya dị mkpa. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ dị iche na-agbanwe azụmahịa na azụmaahịa, kwa ụbọchị na ọbụlagodi site na nkeji - ọfụma, ngwakọta agwakọta nke ọdịnaya agwakọtara ga -emepụta akara siri ike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Sproutsocial: You Na-enwe Nri Ahụike Twitter?
Infographic a na -ekwu maka itule ebumnuche tweet gị. Echefula ịkekọrịta ụdị tweet dị iche iche… Tinye mkparịta ụka na -enweghị njikọ, bulite foto ozugbo site na ngwa Twitter, wee jikọta akaụntụ Youtube gị iji bipụta onwe gị na Twitter. Ma ọ bụrụ na ị na -efunahụ ndị na -eso ụzọ, lelee infographic anyị ama ama, Ihe kpatara ndị mmadụ ji debe gị na Twitter.
Tags: Atụmatụ atụmatụika twitter Atụmatụagụmakwụkwọmuta tweetsahụike twittermmekọrịtammekọrịta tweetsonwe tweetsonye tweetsnkwado tweetsdị mkpamkpa tweetsmkpesaTwitterAtụmatụ twitter
Ọ bụghị onye ọ bụla gị na gị na-emekọrịta ihe bụ onye ahịa